WARBIXIN: Magaalada Dhimashada, Dad aamusan oo Geeri sugayaal ah…. | Balanbaalis.Com	WARBIXIN: Magaalada Dhimashada, Dad aamusan oo Geeri sugayaal ah…. – Balanbaalis.Com
WARBIXIN: Magaalada Dhimashada, Dad aamusan oo Geeri sugayaal ah….
Jun 24, 2017 - jawaab
Colma, waa magaalo ku taalla Gobolka California ee dalka Mareykanka, waana magaalo aad u qallafsan isla markaana ay adag tahay inay maankaaga ka daadegto sheekada qariibka ah ee laga qoray.
Magaalada Colma, cabbirkeeda oo dhan waxaa lagu sheegay inuu yahay laba mayl oo laba jibbaaran (Two Square Miles), magaaladaan waxaa ku nool Kun iyo Toddoba Boqol oo qof oo kali ah (1,700), sida ay daaha ka qaadeen koox tiro-koob ku sameysay dadka degan sannadkii 2016.
Si kastaba ha ahaatee, arrinta la yaabka leh waxay tahay magaaladaan Colma ayaa waxaa ku dhintay dad tiradooda lagu sheegay 1.5 milyan oo qof, waana sababta loogu bixiyey naanaysta ah (Magaalada Dhimashada).
Dadka deggan magaaladan waxay u badan yihiin dad aamusan isla markaana geeri sugayaal ah. Waxayna intooda ugu badan aaminsan yihiin inay ku jiraan maalmihii ugu dambeeyey noloshooda. Dabcan, waxay hoos tagtaa San Francisco oo ah gobolkii loo aqoonsaday Midkii Dhimashada sannadkii 1900, maadaama ay dadka degan gobolkaas ku habsadeen cudurro dadka laayey wakhtiyadaasi. Waana sababta meydad dhan 150 kun oo qof looga raray lafahooda magaalada San Francisco looguna aasay magaaladaan yar ee Colma ee la aasaasay sannadkii 1892kii. Wixii intaas ka dambeeyey magaaladani waxay noqotay middii dhimashada, waxaana lagu aasay illaa haatan 1.5 milyan oo qof oo ku aasan halka ay ku nool yihiin dad ku dhow 1,700 oo shaqsi.
Magacyada naanaysta ah ee Magaaladaan Colma looga yaqaano Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah ‘The City of the Silent’, ‘The City of Souls’ iyo ‘The City of the Dead’. Sababtoo ah dadku waxay caddeynayaan in dadka ku nool magaaladaan ay ka badan yihiin dadka ku aasan magaaladan ee xabaalaha ku jiraa.